Isimo Sezulu Nezimo Eziphuthumayo Manje Zokubuyiselwa Kwezokuvakasha Okuhlaza
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseSeychelles » Isimo Sezulu Nezimo Eziphuthumayo Manje Zokubuyiselwa Kwezokuvakasha Okuhlaza
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Izindaba zaseSeychelles • Ezokuvakasha
Seychelles uchungechunge lwezokuvakasha oluhlaza
Ababambiqhaza abaqhamuka emkhakheni wezokuvakasha kanye nomphakathi bahlangane e-Eden Bleu Hotel embuthanweni obizwa nge-Green Recovery of Tourism Symposium ngoLwesine, ngo-Septhemba 23, ukuzoqhakambisa isimo esiphuthumayo sesimo sezulu kanye nokubaluleka kwezomnotho kokubuyiselwa okuluhlaza kwezokuvakasha.
Kunomsebenzi wokubambisana owenziwayo phakathi koMnyango Wezokuvakasha waseSeychelles, uMnyango Wezolimo, Ukuguquka Kwesimo Sezulu Nezemvelo (MACCE), kanye neKhomishini Ephakeme yaseBrithani.
Uchungechunge lubhekele ukukhubazeka kwezokuvakasha okwandayo emithelelweni yokuguquka kwesimo sezulu.
Ngokuncika okukhulu kwezokuvakasha, lezi zinkinga zimelela ubungozi obukhulu emnothweni.
Lesi sinyathelo sokusebenzisana phakathi koMnyango Wezokuvakasha waseSeychelles, uMnyango Wezolimo, Ukuguquka Kwesimo Sezulu Nezemvelo (MACCE), kanye neKhomishini Ephakeme yaseBrithani, babone ubungozi bokukhuphuka kwezokuvakasha emithelelweni yokuguquka kwesimo sezulu. Uchungechunge luphinde lwabona ukuthinteka komkhakha ekuqageleni kwesikhathi eside kokwehla kohambo olude kusuka kubahambi bomhlaba, ngenxa yokukhathazeka okukhulayo kwemithelela yekhabhoni yezindiza. Ngokuncika okukhulu kwezokuvakasha, lezi zinkinga zimelela ubungozi obukhulu emnothweni wezwe.
Ababambiqhaza abavela kuzo zombili izinhlaka ezizimele kanye nezikahulumeni babelane ngamathuluzi akhona nangemikhuba emihle ekhona njengamanje ukufaka isandla ekuzameni ukulungisa isimo sezulu kanye nemizamo yokunciphisa ngaphakathi kwemboni yezokuvakasha, ukukhuthaza amabhizinisi amaningi ezokuvakasha ukuthi azibandakanye nentuthuko esimeme futhi asekele ngokuzimisela imizamo yokongiwa kwemvelo. Lokhu kufaka phakathi amalebuli esitifiketi esimeme, imfucuza ehlakaniphile nenesibopho, izinhlelo zokuphathwa kwamanzi namandla ezisetshenziswa ezikhungweni, ukuguqula izixazululo ezisuselwa emvelweni emabhizinisini asekelwe emvelweni, nokuxhumanisa ukongiwa kwamanani ezokuvakasha kanye nentuthuko yezentengiso.
Esitatimendeni sakhe kule ngqungquthela, uNgqongqoshe uRadegonde ubalule ukuthi izehlakalo zeminyaka emibili edlule zisikhombisile ukuthi umhlaba ushintsha ngokushesha kangakanani nokuthi ezokuvakasha zisengozini kangakanani ezintweni zangaphandle, ikakhulukazi esifundazweni esincane esiqhingini.
“Sibona futhi nokwenyuka kwesihambi esiyiqaphelayo imvelo, esilindele izindawo zokuvakasha ukuthi zisinikeze izinketho zokuvakasha eziqhubekayo. Isibonelo, ucwaningo lukhombisa ukuthi inani elikhulayo labantu lihlela ukundiza kancane ngamaholide abo ukuze kuncishiswe ukukhishwa kwezindiza ze-CO2 kanye ne-carbon footprint yabo. Ngaphezu kwalokho, izishoshovu zesimo sezulu, ziqale umkhankaso onolaka "wokuhlazisa izindiza" emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eYurophu, okwadambisa izindiza ezithatha isikhathi eside. Le minyakazo ibonakala ithola ukuheha. Futhi azikhombisi okuhle ngomkhakha wethu wezokuvakasha. Sizithola sesiphakathi kwempambano lapho kufanele sikhethe ngokuhlakanipha khona ukuze sibe nekusasa elizinzile futhi, ikakhulukazi, izixazululo ezisuselwa emvelweni okuyiyona nto ebaluleke kakhulu ngaphambi kweCOP 26, ”kusho uNgqongqoshe uRadegonde.
Uchungechunge luphinde lwasebenza njengethuba lokukhanyisa Seychelles'Umnikelo Obuyekeziwe Kuzwelonke (NDCs) - kugxilwe ekuzibophezeleni kukazwelonke kwezokuvakasha - ukwazisa ababambiqhaza bezokuvakasha ngokubaluleka komkhakha ekufezeni lezi zinhloso eminyakeni emihlanu kuya kweyishumi ezayo.
Ingxoxo yephaneli ngesihloko esithi “Ukubuyiselwa Okuluhlaza Kwezokuvakasha; Amagoli, Amathuba kanye Nezidingo ”nakho kwenzeke ntambama. Ama-panelists axoxe ngobubanzi bamathuba emisebenzi nawosomabhizinisi okungenzeka ukuthi ukuvuselelwa kwezokuvakasha okuluhlaza kungaletha emiphakathini yasendaweni; isidingo sokululama okubandakanya ukucubungula izidingo nezinselelo kubo bonke ababambiqhaza bezokuvakasha; ukuvuselelwa okuluhlaza okunomthelela kanjani eSeychelles 'Blue Economy, nokuthi ezokuvakasha ezisekelwe emvelweni zingaluthola kanjani uxhaso lwezinhlelo zokongiwa kwesikhathi eside ngesikhathi sezinhlekelele embonini yezokuvakasha, njengoba kukhombisa ukuqubuka okuqhubekayo kobhadane lwe-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Ababambiqhaza baphinde bazindla ngezidingo ezidingekayo ukuze kuzuzwe ukuvuselelwa okuluhlaza kwezokuvakasha - kanye nokulungiswa kwesimo sezulu nokunciphisa izinhloso - njengengxenye yokukhiqizwa kombhalo womphumela. Lo mbhalo omfushane uzokhombisa inhloso yochungechunge, futhi ufingqe kafushane izingxoxo nokuzindla okwenziwe ngesikhathi somcimbi. Lo mbhalo ubuye ufake isibambiso esifushane esizinze kwi-NDC nesigxile kwezokuvakasha - esizosetshenziswa njengendawo okuzobhekwa kuyo izingxoxo zesikhathi esizayo - lapho ababambiqhaza abazomenywa ukuba basayine.
Okubalulekile ukuthi kube nokuvumelana okukhulu phakathi kwabahlanganyeli ukuthi iSeychelles ibekwe kahle ukujwayela ukuguqula indlela yokuziphatha kwabathengi ekuhambeni kwamazwe omhlaba futhi ube ngumholi womhlaba kwezokuvakasha okusimeme - ngokungangabazeki ukwedlula noma iyiphi enye indawo. I-Green Recovery Tourism eseychelles, njengoba kuhlongozwe yile Symposium, ngakho-ke izophenduka usongo olukhulu kwezomnotho, ibe yithuba lezomnotho lesikhathi eside.